Aquarius ee Zodiac qadiimiga ah - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Aquarius waa xubinta lixaad ee Burjika waana qayb ka mid ah Unugga Zodiac-ka oo muujinaya natiijooyinka guusha Midka imanaya. Waxay ka samaysan tahay sawirka nin ku shubaya webiyo biya ah oo ka soo baxaya weelka samada. Aquarius waa Laatiinka biyaha qaade. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa Janaayo 21 iyo Febraayo 19 waxaad tahay Aquarius. Haddaba akhriska horoscope casrigan casriga ah ee zodiac-kii hore, waxaad raacdaa talada horoscope ee Aquarius si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, caafimaad, oo aad aragtid shakhsiyaddaada u hesho.
Aquarius waxay muujinaysaa in harraadkeena farxadda ee hantida, nasiibka iyo jacaylka aan ku filnayn. Laakiin kaliya ninka ku nool Aquarius ayaa siin kara biyaha naga dhergi doona haraadkayaga. Zodiac qadiimiga Aquarius wuxuu bixiyaa biyahiisa dadka oo dhan. Markaa xitaa haddii aad tahay ma Aquarius ee dareenka horoscope-ka casriga ah, sheekadii hore ee xiddigiska ee xiddigaha Aquarius ayaa mudan in la ogaado si aad adigu u dooran karto inaad ka cabto biyahiisa naftaada.
Xiddigaha Aquarius ee Xiddigaha
Waa kuwan xiddigaha sameeya Aquarius. Ma ku arki kartaa wax u eg nin biyo ka soo shubaya weel ka mid ah sawirkan xidigta ah?
Sawirka xiddigaha Aquarius
Xitaa haddii aan ku xirno xiddigaha Aquarius leh xariiqyo, weli way adag tahay in la ‘arko’ sawir kasta oo noocaas ah. Haddaba sidee qof xitaa u malayn karaa nin biyo ku shubaya kalluunkan?
Aquarius oo leh xiddigo ku xiran khadadka
Laakiin calaamadani waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha. Halkan waxaa ah zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano, oo leh sawirka biyaha-sida Aquarius oo ku wareegsan casaan. Waxa kale oo aad ku arki kartaa sawirka dhinaca in biyuhu u qulqulayaan kalluunka.
Zodiac Masaarida ee Dendera oo Aquarius ku wareegsan
Halkan waxaa ah boodhka National Juqraafiga ee zodiac oo muujinaya Aquarius sida lagu arkay Hemisphere Koonfureed.
Shaxda xiddigta Zodiac National Geographic oo leh Aquarius goobaabin
Xitaa haddii aan ku xidhno xiddigaha samaynaysa Aquarius oo leh khadadka si ay u muujiyaan xiddigaha Burji, weli way adag tahay in la ‘arko’ wax u eg nin, weel iyo ku shubista biyaha ee xiddigan. Laakiin hoos waxaa ah qaar ka mid ah sawirada xiddigiska caadiga ah ee Aquarius
Aquarius & Wabiyada Biyaha
Sawirka zodiac dhaqameed ee Nin Aquarius ah oo u shubaya biyaha kalluunka (Piscis Australis – Kalluunka Koonfureed)
Aquarius ayaa la arkay isagoo ku shubaya biyaha Piscis Australis – Kalluunka Koonfureed
Sida xiddigaha kale ee zodiac, sawirka Biyo-qaaduhu maaha mid iska cad oo ka mid ah xiddigaha laftiisa. Ma aha mid ku dhalanaysa kooxda xiddigaha. Balse, fikradda oo ka mid ah Biyo-qaadka ayaa ka hor yimid wax aan xiddigaha ahayn. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha si ay u noqoto calaamad soo noqnoqonaysa.
Maxay ula jeedeen dadkii hore? Waa maxay sababta Aquarius waqtiyadii hore lala xiriiriyay Kaluunka Koonfureed koox koox si ay biyaha ka soo qulqulaya Aquarius u ordaan kalluunka?
Waan aragnay, oo leh Virgo, in Qur’aanka iyo Baybalka/Kitaabku ay sheegeen in Eebbe sameeyey xiddigaha. Wuxuuna siiyey calaamado ku tusi dadka intuu waxyi ka soo dejin. Markaasay Nabi Aadam iyo Wiilashiisii ​​bareen Ubadkooda si ay ugu baraan Qaddarka Eebe. Virgo wuxuu sii sheegay Wiilka Bikrada ah ee iman doona – Nebi Isa al Masih NNKH. Waxaan ka shaqaynay jidkayaga Sheekada sharraxaysa Khilaaf Weyn oo hadda waxaynu ku jirnaa cutubkii labaad oo daaha ka fayday faa’iidada uu inoo leeyahay guushiisa.
Macnaha asalka ah ee Aquarius
Aquarius wuxuu dadkii hore u sheegay laba runood oo waaweyn oo maanta xikmad inoo ah.
Waxaan nahay dad harraadsan (oo ay astaan ​​u tahay Kaluunka Koonfureed biyaha lagu dhex cabbo).
Biyaha ka yimaadda ninka ayaa ah biyaha kaliya ee ugu dambeyntii ka bi’in doona haraadkayaga.
Nebiyadii hore waxay kaloo bareen labadan xaqiiqo.
Nebiyadii hore siyaabo kala duwan ayay haraadkeena wax uga qori jireen. Daawuud ee Zabuur ayaa u dhignaa sida tan:
Sida deeradu biyaha durdurka ugu harraaddo,
Sabuurradii 42:1-2 (Sabuur)
Ilaahow, waxaad tahay Ilaahay, oo anna goor hore ayaan ku doondooni doonaa,
Naftaydu adigay kuu oomman tahay, jidhkayguna aduu kuu xiisoodaa,
Anoo jooga dhul engegan oo daal miidhan ah oo aan biyo lahayn.
Sabuurradii 63:1 (Sabuur)
Laakiin dhibaatooyinku waxay soo baxaan markaan raadinno inaan ku qancino harraadkan ‘biyo’ kale. The Nebi Yeremyaah baray tani waxay ahayd asalka dembigeenna.
Waayo, dadkaygii laba waxyaalood oo shar ah ayay sameeyeen, way iga tageen anigoo ah isha biyaha nool, oo waxay qoteen berkedo daldaloola oo aan innaba biyo celin karin.
Godadka biyood ee aynu daba galno waa badan yihiin: lacag, galmo, raaxaysi, shaqo, qoys, guur, mansab. Laakiin kuwani ma qancin karaan oo waxaynu ku dambaynaynaa weli ‘haraad’ wax badan. Waa tii Suleymaan, Boqorkii weynaa ee caqligiisa ku caan baxay. waayo arag ah oo wax ka qoray. Laakiin maxaan samayn karnaa si aan haraadkayaga u bixno?
Biyo Waara Oo Haraadkeena Kajabiya
Nebiyadii hore waxay sidoo kale saadaaliyeen waqti ay haraadkeennu dami doonaan. Ilaa hadda sida Nabi Muuse NNKH oo ku sugan Taurat Waxaan rajeyneynaa maalinta:
Baaldiyadooda waxaa ka daadan doona biyo,
Oo farcankoodu wuxuu ku jiri doonaa biyo badan,
Oo boqorkooduna wuu ka sarrayn doonaa Agag,
Oo boqortooyadoodana waa la sarraysiin doonaa.
Tirintii 24:7 (Tawraad)
The Nebi Ishacyaah lasoco fariimahan
Bal eega, boqor baa xaqnimo ku talin doona, oo amiirrona caddaalad bay wax ku xukumi doonaan. 2 Oo ninba wuxuu noqon doonaa meel dabaysha lagaga dhuunto iyo gabbaad duufaanka laga dugsado, iyo sida webiyo biya ah oo meel engegan ku yaal, iyo sida hoos dhagax weyn oo dal oommane ah ku yaal.
Ishacyaah 32: 1-2
Masaakiinta iyo saboolka baahanuba biyay doondoonaan, mana jiraan, carrabkoodiina oon buu la engegay, anigoo Rabbiga ah ayaa u jawaabi doona, anigoo ah Ilaaha reer binu Israa’iil ma dayrin doono.
Ishacyaah 41: 17
Laakiin sidee haraadka loo deminayaa? Nabigu wuu sii hadlay
Waayo, kii oomman biyaan ku shubi doonaa. Ruuxayga ayaan farcankiinna ku daadin doonaa, oo barakadaydana carruurtiinnaan ku shubi doonaa.
Ishacyaah 44: 3
In injiilka Nebi Ciise al Masih NNKH wuxuu ku caddeeyey inuu yahay isha biyahaas
Maalintii u dambaysay, oo ahayd maalintii weynayd ee iidda, Ciise ayaa istaagay oo qayliyey isagoo leh, Haddii qof uun harraado, ha ii yimaado, hana cabbo. 38 Kii i rumaysta, calooshiisa waxaa ka duuli doona webiyo biyaha nool ah, sida Qorniinku u yidhi. 39 Waxaas ayuu kaga hadlay Ruuxa oo ay kuwii isaga rumaystay heli doonaan, waayo, Ruuxa weli lama bixin, maxaa yeelay, Ciise weli ma ammaanmin.
Yooxanaa 7: 37-39
Injiilku wuxuu qeexayaa in ‘biyuhu’ ay yihiin sawirka Ruuxa, kaas oo u yimid inuu dadka dhex noolaado Bentakostiga. Tani waxay ahayd dhammaystirka qayb ahaan, oo lagu dhammayn doono Boqortooyada Ilaah sida ay tiraahdo:
Markaasay malaa’igtii i tustay webi ah biyaha nolosha, oo u dhalaalaya sidii madarad oo kale, oo ka soo baxaya carshigii Ilaah iyo Wanka,
Muujintii 22: 1
Yaa biyo uga baahan kalluunka? Haddaba Aquarius ayaa la sawiray isagoo biyahiisa ku shubaya kalluunka Piscis Australia – Kalluunka Koonfureed. Tani waxay tusinaysaa runta fudud ee ah in guusha iyo nimcooyinka uu ninku ku guulaystay – Abuurka bikrada – waxaa hubaal ah inay qaabili doonaan kuwa loogu talagalay. Si aan tan u helno waxaan u baahanahay:
Hoy, kuwiinna oomman oo dhammow, xagga biyaha kaalaya, xataa kii aan lacag haysanow, kaalaya, wax iibsada, oo wax cuna, kaalaya oo khamri iyo caano lacagla’aan iyo iibla’aan ku qaata. 2 Haddaba bal maxaad lacag ugu bixisaan wax aan cunto ahayn? Oo wixii aad ku hawshooteenna maxaad ugu bixisaan wax aan idin dherjinayn? Bal aad ii maqla, oo waxa wanaagsan cuna, oo naftiinnuna ha iskaga istareexdo barwaaqo miidhan. 3 Dhegihiinna soo dhiga, oo ii kaalaya, i maqla oo naftiinnuna way noolaan doontaa, oo anna waxaan idinla dhigan doonaa axdi weligiis ah, kaasoo ah waxyaalahii naxariista lahaa oo la hubo ee aan Daa’uud u ballanqaaday.
Ishacyaah 55: 1-3
The kalluunka kalluunka ku balaadhiya sawirkan, isagoo siinaya tafaasiil dheeraad ah. Hibada Biyihiisu waa diyaar dhammaan – adiga iyo aniga ayaa ku jira.
Aquarius Horoscope ee Qoraaladii Hore
Horoscope Waxay ka timid Giriigga ‘Horo’ (saac) oo markaa macnaheedu waa calaamadaynta saacadaha gaarka ah. Qoraallada nebigu waxay calaamad u yihiin Aquarius ‘horo’. Aquarius waxaa u calaamadeeyay Nebi Isa al Masih habkan.
Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Kii kasta oo biyahan ka cabbaa, mar kale wuu harraadi doonaa, 14 laakiin ku alla kii ka cabba biyahaan siin doono, weligiis ma harraadi doono, laakiin biyahaan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah. 21 Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Naag yahay, i rumee, saacaddu waa imanaysaa markii aydnaan Aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Yeruusaalem midnaba. 22 Idinku waxaad caabuddaan waxaydnaan oqoon, annaguse waxaannu caabudnaa waxaannu naqaan, waayo, badbaadintu waxay ka timaadaa Yuhuudda. 23 Laakiin saacaddii baa imanaysa, waana joogtaa imminkada, markii caabudayaasha runta ihi ay Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo, Aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale.
Yooxanaa 4:13-14, 21-23
Hadda waxaan joognaa ‘saacaddii’ Aquarius. Saacadani maaha saacad gaar ah oo gaaban sida Capricorn. Taa beddelkeeda waa ‘saac’ furan oo dheer oo ballaadhan oo sii socota laga bilaabo wakhtiga wada hadalkaas ilaa maanta. Saacaddan Aquarius Isa al Masih waxa ay ina siinaysaa biyo ilaa nolosha weligeed ah ee dhexdeena ah.
Erayga Giriigga ee nebigu laba jeer adeegsaday waa halkan yasido, la mid ah xididka ‘horoscope’.
Akhrinta Horoscope-kaaga Aquarius ee Zodiac-kii hore
Adiga iyo aniga waxaan u adeegsan karnaa akhrinta horoscope Aquarius maanta siyaabaha soo socda.
Aquarius waxa uu yidhi ‘ is ogow’. Waa maxay gunta hoose ee aad u harraadsan tahay? Sidee u haraadkan isu tusi sida sifaadka ay dadka kugu xeeran u arkaan? Waxaa laga yaabaa inaad ka warqabto harraad aan caddayn oo loo qabo ‘wax kale’, hadday tahay lacag, nolol dheer, galmo, guur, xiriir jacayl, ama cunto iyo cabitaan ka wanaagsan. Harraadkaasi wuxuu kaa dhigi karaa mid aan la jaan qaadi karin kuwa mar horeba kuugu dhow, taasoo keeni karta niyad jab mid kasta oo ka mid ah cilaaqaadkaaga qoto dheer, hadday yihiin kuwa la shaqeeya, xubnaha qoyska ama kuwa jecel. Ka digtoonow in harraadkaagu uusan kuu horseedin inaad lumiso waxaad haysato.
Hadda waa wakhti ku habboon in la is weydiiyo waxa loola jeedo ‘biyaha nool’. Waa maxay sifooyinka ay leedahay? Erayada ay ka midka yihiin ‘nolosha weligeed ah’, ‘guga’, ‘ruuxa’ iyo ‘runta’ ayaa loo adeegsaday si loo qeexo bixinta Aquarius. Waxay maskaxda ku hayaan astaamo ay ka mid yihiin ‘badanaan’, ‘qanacsanaan’, ‘nasasho leh’. Tani waxay u jeedin kartaa cilaaqaadkaaga si aad u noqoto ‘bixiye’ halkii aad ka ahaan lahayd ‘qaade’ kaliya.
Laakiin wax walba waxay ka bilaabmaan ogaanshaha haraadkaaga iyo inaad daacad ka noqoto waxa ku riixaya. Haddaba ku dayo tusaalaha haweeneyda wada hadalkan oo arag bal inaad baran karto sida ay u qaadatay dalabka. Nolol qiimo leh ayaa ku timaada markaad qalbigaaga baarto.
Si qoto dheer u galay Aquarius & iyada oo loo marayo Sheekadii Zodiac ee hore
Calaamadda Aquarius asal ahaan looguma talagalin inay hagto go’aamada ku wajahan caafimaadka, jacaylka iyo barwaaqada kaliya kuwa dhashay inta u dhaxaysa Janaayo 21 iyo Febraayo 19. Waxaa la dhigay xiddigaha si ay dhammaan u xusuustaan ​​inaan u harraadno wax badan oo noloshan ah. Calaamadda ayaa la dhigay waqti dheer ka hor xiddigaha in Wiilka bikrada ah Imaan lahaa yaa haraadkaas naga bixi lahaa. Si aad u bilowdo Sheekadii Zodiac-kii hore bilowgiisa arag Virgo. Pisces Waxay sii waddaa Sheekada Zodiac. Si aad u fahanto fariinta qoran ee Aquarius si aad si fiican u fahanto ‘biyaha nool’ eeg:
Nebi Isa al Masih wuxuu bixiyaa ‘Biyo Nool’
Rooti Nolosha iyo Wabiyada Biyahar
Ruuxu wuxuu yimaadaa Bentakostiga
Faham oo hel Hibada Nolosha